Troubleshooting "Hapana Bootable Medium Yakawanikwa" Kanganiso muVirtualBox
zhinji Virtualbox vashandisi vakasangana kana kamwechete meseji 'FATAL: Haugone kuverenga kubva kubhuti yepakati! Sisitimu yakamira.'Dzimwe nguva zvinoratidzwawo'Hapana Bhuu Inotakurika Yakawanikwa! Sisitimu yakamira'.
Kanganiso iyi inowanzoitika kana uchiedza kutanga muchina mutsva, asi hazviite kuti zviitike pamushini uripo kana iri hard drive isipo.
chitsamba: Dambudziko iri rine chekuita neVirtualBox chete, uye inogona kuve neruzivo pane chero inomiririra sisitimu inoshanda ive iri Windows, Mac OS kana Linux.
Chii chinokonzeresa iyi "Kutadza kuverenga kubva kubhoot medium" kukanganisa?
Pane zvikonzero zviviri zvakakonzera nyaya iyi:
VirtualBox hainongedze kune anoshanda masisitimu, kungave kwakakwiridzirwa iso kana rakapotsa rakaomarara diski ine bootable OS. Paunogadzira muchina wekutanga kekutanga, unofanirwa kukwidza bootable iso senge Ubuntu. Kana iwe ukakwira bootable iso usati watanga yako chaiyo muchina, iwe unenge uri kubudirira kubhuisa kumusoro iyo system.
CD / DVD chengetedzo yedhijitari inogadziriswa seSATA. Imwe nyaya inogona kuoneka, kana iwe ukakwira netsaona iyo bootable iso kune iyo SATA yekuchengetera mudziyo wedha panzvimbo yeIDE. VirtualBox inoshanda pasina chero matambudziko kana iyo SATA yekuchengetera chishandiso ichinongedzera kune chaiyo hard drive, asi iyi haisi iyo kesi ye bootable iso.
Kana iwe usina chokwadi kuti ndechipi pazvikonzero zviviri zvinoshanda kwauri, ini ndinogona kukuratidza mhinduro inovhara zvese zviri zviviri, uye pakupedzisira mira kugamuchira meseji yekukanganisa.
Step 1: Kurudyi tinya pane chaiyo muchina iyo isiri iyo bootable nyika uye tinya pazvirongwa.
Step 2: Kana iyo maseturu menyu avhurwa, tevera matanho ekuwana chengetedzo> Mutongi: IDE> Sarudza bootable iso uye tinya zvakanaka.
Step 3: Tanga yako chaiyo muchina uye iwe unofanirwa kugona kubhowa zvakajairika kubva kune yakaiswa iso.
VirtualBox bhuti nyaya yakajairika, uye iri nyore kugadzirisa asi inogona kunetsa kana iwe usingazive zvekuita. Kana iwe uri muverengi wenguva dzose weiyo FOSS, iwe unoziva kare kuti iyo virtualization tekinoroji iri pakati pezvandinofarira. Kana iwe ukatiwana isu nguva pfupi yadarika uye iwe uchida kuziva kuti utange kuongorora maficha eVirtualBox, ini ndinokurudzira kutanga kuedza nazvo iri gwaro rinofukidza kuiswa kweFedora paVirtualBox, sezvo iwe uchigona kupfuura kupfuura nyore kuiswa.
Mashandisiro Aungaita Medium: Yekutanga Gwaro kune Kunyora, Kuburitsa & Kukurudzira pane Platform
Maitiro ekuisa Fedora muVirtualBox [Ine Matanho eUSB, Clipboard uye Kugovana kweFolder]
Zvaungaita Kugadzirira Windows 10 Bootable USB Pa Linux
How to Install VirtualBox on Ubuntu [Tginner's Tutorial]
Maitiro Ekumisa ISO uye IMG Mafaira mukati Windows 10
Maitiro ekuisa Linux Mint muVirtualBox [Screenshot Tutorial]